Hlola i-Nottingham, eNgilandi - World Tourism Portal
Hlola i-Nottingham, eNgilandi
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Nottingham
Bukela ividiyo ngeNottingham
Hlola i-Nottingham idolobha i-206 km enyakatho ne London, 72 km enyakatho-mpumalanga ye Birmingham kanye ne-90 km eningizimu-mpumalanga ye Manchester, eMpumalanga Midlands. INottingham inendawo yokuxhumana nenganekwane kaRobin Hood kanye nokwenza amakhethini, amabhayisekili (ikakhulukazi ama-Raleigh bikes) kanye nezimboni zikagwayi. Yanikwa imvume yayo yedolobha e1897 njengengxenye yemigubho yeNdlovukazi ye-Diamond Jubilee. INottingham indawo yokuvakasha; e-2011, izivakashi zisebenzise imali engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 1.5 — okuyishumi nantathu-inani eliphakeme kakhulu ezindaweni zezibalo zase-England ze111.
Yindawo enkulu yasemadolobheni eMpumalanga Midlands futhi eyesibili ngobukhulu eThe Midlands. Isibalo sendawo yedolobha elikhulu leNottingham / Derby silinganiselwa kwi-1,610,000. Umnotho wasemadolobheni omkhulu ungowesikhombisa ngobukhulu e-United Kingdom. Lo muzi ungowokuqala e-East Midlands ukubalwa njengedolobha lomhlaba ngokwenele yi-Globalization and World Cities Research Network.
INottingham inohlelo lokuwina umphakathi oluwina umklomelo, kufaka phakathi inethiwekhi yamabhasi enkulu kunazo zonke enabanikazi bakahulumeni England futhi iphinde ihanjelwe yisiteshi sesitimela i-Nottingham nohlelo lwanamuhla lweNottingham Express Transit.
Futhi siyisikhungo esikhulu sezemidlalo, kwathi ngo-Okthoba 2015, saqanjwa ngokuthi 'Ikhaya le-English Sport'. INational Ice Center, iHolme Pierrepont National Watersports Center, kanye I-Trent Bridge inkundla yamakhilikithi yamazwe omhlaba yonke ingene phakathi kwedolobha noma ezungeze idolobha, okubuye kube yikhaya lamaqembu eqembu lezinyawo. Idolobha lelo futhi linamaqembu wombhoxo ochwepheshe, ama-ice hockey namaqembu ekhilikithi, kanye ne-AEGON Nottingham Open, umqhudelwano wamathenisi aphesheya kwezilwandle ohambweni lwe-ATP neWTA.
Ku-11 ngo-December 2015, uNottingham waqanjwa ngokuthi "iDolobha Lezincwadi" yi-UNESCO, wajoyina iDublin, Edinburgh, Melbourne nePrague njengenye yezimbalwa kuphela emhlabeni. Lesi sihloko sibonisa ifa lemibhalo yaseNottingham, neNkosi Byron, DH Lawrence kanye no-Alan Sillitoe aba nokuxhumana kuleli dolobha, kanye nomphakathi wezincwadi wesimanjemanje, imboni yokushicilela kanye nezindawo zezinkondlo.
E-2010, idolobha laqanjwa njengelinye lamadolobha "aphezulu i-10 Cities to vakashela e2010" ngu-DK Travel. Ku-2013 bekucatshangwa ukuthi idolobha lithola izivakashi zaphesheya kwe247,000.
KuneRobin Hood Pageant eseNottingham ngo-Okthoba. Leli dolobha likhaya leNottingham Robin Hood Society, elisungulwe e1972 nguJim Lees noSteve no-Ewa Theresa West.
NgoFebhuwari 2008, kwafakwa isondo likaFerris e-Old Market Square futhi kwakuyinto ekhangayo "iLight Night" yaseNottingham City Council.